Zvakundikana Vatengi Zviitiko Zviri Kuparadza Kushambadzira Kwako Martech Zone
Zvakakundikana Vatengi Zviitiko Zviri Kuparadza Kushambadzira Kwako
China, May 14, 2015 Chishanu, May 15, 2015 Douglas Karr
SDL yakaita ongororo kuti iongorore kuti kupi kana imwe chete kana akakurumbira mapoinzi e chiitiko chevatengi (CX) kutadza uye kubudirira zvinoitika nevatengi uye zvinokanganisa bhizinesi.
Zvichida mhedzisiro inotyisa yeiyi ongororo ndeyekuti SDL yakawana kuti vashandisi vazhinji vakatambura neruzivo rwevatengi achishingairira kuyedza kushora kambani mukana wese wavanogona neshoko-remuromo uye izvo zvinosanganisira zvemagariro midhiya uye dzimwe nzira dzekutsikisa pamhepo.
Yikes… mune nyika yakabatana, kutadza kwevatengi ruzivo kuri kukanganisa kushambadzira kwako. Nhau dzakaipa dzinofamba nekukurumidza uye izvi zviitiko zvinogona kudzikatidza chero nzira dzakanaka dzauri kutumira online.
Zviwanikwa zvakakosha mune infographic zvinosanganisira
Zvinotyisa CX kukundikana zvinowanzoda isingasviki nguva yeawa uye zvinodhura zvakaderera pane masikati kudya.
Kunyangwe zvakafanira kana kwete, vana vevashanu vanopomera vanhu kukundikana kweCX.
21% yekukanganisa kukuru kweCX kunoitika mutengi asati atenga.
27% yevechidiki mamireniyoni haazoyedze kugadzirisa kutadza, zvichienzaniswa ne13% yevana vacheche.
Vanopfuura makumi mana muzana evatengi ' zvakaipisisa zviitiko zveCX zvakaitika mumaindasitiri edhijitari (kureva kutaurirana, zvemagetsi uye yekutengesa online).
Saka zvinoshamisa. Mune mamwe mazwi, akawanda Kukundikana kweCX makambani ari kukanganisa zvakanyanya anogona kuzivikanwa vasati vasvika kumutengi, anogona kugadziriswa nekushomeka kushoma, vatengi vazhinji vachasiya kambani zvachose - uye tekinoroji inowanzova musimboti wehurombo hwevatengi ruzivo.
Tags: vatengi vanozivamutengi ruzivo kutadzachiitiko chevatengi chinokanganisavatengi vanoziva zvemagariro midhiyacxcx kutadzacx kukanganisacx midhiya enhausdlsdl ruzivo rwevatengi ruzivosdl cx kuongororatsvakurudzo
Uri Kushanda neDomain Registrar kana Reseller?
Sweetspot: Yenhare Yekutanga, Workflow-Powered Dhijitari